सन् २०२२ मा विश्वका शीर्ष १०० सबैभन्दा ग्राहक केन्द्रित कम्पनीहरू - Victor Mochere
एक ग्राहकको रूपमा तपाईले यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जब कम्पनी तपाईको लागि माथि र बाहिर गएको छ, यो फरक महसुस गर्दछ। तर यदि ग्राहकहरूका लागि माथि र बाहिर जान धेरै सजिलो थियो भने, प्रत्येक व्यवसायले यो गर्नेछ - तर तिनीहरू गर्दैनन्। किन? खैर यो गर्न गाह्रो छ। तपाईंले आफ्नो कम्पनीको हड्डीको भाग नबनाएका बेला तपाईंका सबै ग्राहकहरूका लागि एउटा अद्भुत अनुभव सिर्जना गर्न गाह्रो छ। तर केहि चम्किलो तारा ब्रान्डहरूले वास्तवमा यो गर्छन्, र तिनीहरूले कसरी "यसलाई" सधैं गर्ने भनेर पत्ता लगाएका छन्।
तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरूले ग्राहकहरूलाई राम्रो महसुस गराउँछन्। यसैले ग्राहक अनुभवको साथ नेतृत्व गर्ने 89% कम्पनीहरूले आफ्ना साथीहरूको तुलनामा आर्थिक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। यी कम्पनीहरूसँग उनीहरूले गर्ने सबै कुराहरूमा ग्राहकको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छन् भन्नेदेखि लिएर उनीहरूले आफ्ना स्थानीय समुदायहरूलाई कसरी आविष्कार गर्छन् र सेवा दिन्छन् - किनकि तपाईं अब खाली ठाउँमा काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले लिनुहुने हरेक कार्य, हरेक निर्णयको पुतली प्रभाव हुन्छ, र आज ग्राहक-केन्द्रित हुनु भनेको आत्म-सजग हुनु पनि हो।
धेरै ग्राहक-केन्द्रित कम्पनीहरू उत्कृष्ट ग्राहक अनुभवको लागि मात्र परिचित छैनन्, तिनीहरू काम गर्नको लागि उत्कृष्ट स्थानमा उत्कृष्ट छन्, तिनीहरूसँग उच्च ग्राहक सन्तुष्टि छ, तिनीहरूले संस्कृति पुरस्कारहरू प्राप्त गर्छन्, नवीनता मान्यता प्राप्त गर्छन्। ग्राहकहरूले कम्पनीहरूले ग्राहक अनुभवहरू निजीकृत गर्न जारी राख्छन्, र ग्राहकहरूलाई उनीहरू जहाँ छन्, भेट्छन्, चाहे त्यो डिजिटल ढोकामा होस्, वा फिजिटल अनुभवमा। आजका कम्पनीहरूले परिवर्तन गरिएका ग्राहकहरू, नयाँ दबाबहरू, र उनीहरूको समुदाय र संसारमा भिन्नता ल्याउन बलियो आवश्यकताको सामना गरिरहेका छन्।
शीर्ष ग्राहक-केन्द्रित कम्पनीहरू निम्न मापदण्डहरूमा आधारित छन्:
ग्राहक केन्द्रित मानसिकता - कम्पनीहरूले ग्राहक सेवा र अन्य च्यानलहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छन्? के कम्पनीले गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरूसँग तनाव कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ? के कार्यकारीहरू ग्राहक अनुभवमा संलग्न छन्? के त्यहाँ कुनै संस्कृति छ जहाँ कर्मचारीहरू ग्राहकहरूको सेवा गर्न उत्साहित हुन्छन्?
सामुदायिक र वातावरणीय जिम्मेवारी - ग्राहकहरू कम्पनीहरूले जातिवाद र असमानतामा अडान लिन चाहन्छन्। के कम्पनीहरूले विविधता र वातावरण जस्ता महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मुद्दाहरूको लागि अडान लिन्छन्? के तिनीहरूले पारदर्शिता र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिन्छन्?
कर्मचारी अनुभव - के कर्मचारीहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सक्षम छन्? के तिनीहरूसँग काममा मूल्यवान महसुस गर्न र ग्राहकहरूलाई सेवा दिन उपकरणहरू, भौतिक ठाउँ र संस्कृति छ? सम्पर्क केन्द्रहरू धेरै ढिलो कर्मचारी उपलब्ध गराउन कुख्यात छन्। तिनीहरूले सम्पर्क केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई बच्चाहरू जस्तै व्यवहार गर्छन्, धेरै जसो ग्राहक सेवा अन्तरक्रियाहरू धेरै निराशाजनक बनाउँछन्
अभिनव - के कम्पनीले समस्याहरू समाधान गर्न रचनात्मक तरिकाहरू फेला पारेको छ? के तिनीहरू आफ्नो उद्योगको नेतृत्व गर्दै र नवीन समाधानहरू सिर्जना गर्दै छन्? नवीन कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा दिन सधैं नयाँ र राम्रो तरिकाहरू खोजिरहेका छन्
यहाँ संसारमा शीर्ष 100 सबैभन्दा ग्राहक-केन्द्रित कम्पनीहरू छन्।
रेस्टुरेन्ट र खाना
उत्पादन र रसद
व्यापारी जो हो
मासु भन्दा बाहिर
फ्रिज थप छैन
ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब
सेन्ट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च अस्पताल
बोस्टन परामर्श समूह
डलर कार भाडा
ब्लू क्रस ब्लू शील्ड